फोटोस्केप एक्स म्याकको लागि फोटो एक्सटेन्सनको समर्थनको साथ अपडेट भयो म म्याकबाट हुँ
फोटोस्केप एक्स म्याकको लागि फोटो विस्तारहरूको समर्थनको साथ अपडेट भयो
जेभियर पोर्कर | | म्याक अनुप्रयोग स्टोर, धेरै
केही घण्टा अघि हामीले एउटा पुरानो तस्बिर सम्पादकको अपडेटको समाचार सुनेका थियौं। हामी कुरा गर्दैछौं फोटोस्केप X, को कार्यक्रम म कुरा गर्छु म म्याकबाट २०१ 2015 मा। यस्तै धेरै प्रोग्रामहरू छन्, तर आज यो अनुप्रयोगसँग दुई कारकहरू छन् जुन यसलाई डाउनलोडको संख्यामा वृद्धि गराउँदछ। एक तर्फ, मिति मा यो नि: शुल्क छ कम्तिमा आधारभूत संस्करण, जसमा असंख्य प्रकार्यहरू छन्, प्रयोगकर्ताहरूको विशाल बहुमतका लागि पर्याप्त भन्दा बढी। र दोस्रो, यस अपडेट पछि, यो नेटिभ एप्पल फोटो कार्यक्रम को लागी एक्सटेन्सन छ।
यी प्रकारका विस्तारहरूले तस्बिर अनुप्रयोगलाई बढाउँछन्। अन्यथा, उसका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई मनपर्दछ फोटोशप लाइटरूम तिनीहरूले तपाइँको प्रयोगकर्ताहरूको एक भाग लिन्छन्। फोटोस्केप एक्स जुलाई १ news मा निम्न खबरका साथ अपडेट गरिएको थियो।
फोटोका लागि विस्तार थपियो (MacOS १०.११ को रूपमा)
थपियो मेटाडाटा सम्पादन, मेटाडाटा टाँस्नुहोस्, छवि क्याप्चर व्यवस्थापन।
यसका साथ नयाँ सुविधाहरू: लाई प्रतिलिपि गर्नुहोस् y सार्नुहोस्।
नयाँ तरिकाहरू पाठको: आर्चहरू, घेरा, बेलुन, झण्डा, माछा, र अन्यमा।
थपियो २० नयाँ फ्ल्यासहरू।
थपियो २००० प्रभाव एक एन्टिक टच वितरण।
थपियो St स्टिकर.
थपियो नयाँ रेखाचित्र उपकरणहरू.
थपियो ग्रेडियन्टको नयाँ शैलीहरू।
नयाँ फिल्टरहरू: कागजात वृद्धि, kaleidoscope, त्रिकोण, र कैंची
अनुप्रयोग एक मा छ भाषाहरूको ठूलो संख्या: पोर्तुगाली, फ्रेन्च, इटालियन, अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन र चिनियाँ। एप्लिकेसन प्रयोग गर्न तपाईले म्याक एप्पल स्टोरमा जानुपर्नेछ र त्यहाँको एप्लिकेसनको पूर्ण संस्करण डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। हामीले भनेझैं आज यो सित्तैंमा छ। एक पटक खरीद, डाउनलोड, र स्थापित, एक पटक अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
त्यसोभए फोटो विस्तारहरूमा जानुहोस्। यो गर्नका लागि फोटो सम्पादन गर्न सम्पादन बटनमा जानुहोस् र अन्तिम विकल्पमा तपाई एक्स्टेन्सनहरू भेट्टाउनुहुनेछ। पहिलो पटक तपाई जानुहोस् "अरु", जहाँ एक विन्डो प्राथमिकताहरू। फोटोस्केप एक्स फेला पार्नुहोस् र चेक चयन गर्नुहोस्। त्यस क्षणदेखि, तपाईंसँग तपाईंको फोटो अनुप्रयोगमा एक पूर्ण फोटो सम्पादक उपलब्ध हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » फोटोस्केप एक्स म्याकको लागि फोटो विस्तारहरूको समर्थनको साथ अपडेट भयो
प्रसारको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। केवल तपाइँलाई तपाइँको पाठकहरूलाई योगदान दिन भन्नुहोस् कि कार्यक्रम १००% नि: शुल्क र कानुनी माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ https://photoscape.info/mac/
फोटोस्केपलाई जवाफ दिनुहोस्
आईट्यून्स संस्करण ११..12.6.2 मा अद्यावधिक गरिएको छ
SpotMenu को साथ मेनू पट्टीमा Spotify प्लेब्याक नियन्त्रण जोड्नुहोस्